Michel Houellebecq ane zuva rekuzvarwa. 5 nhetembo dzebasa rake | Zvazvino Zvinyorwa
Michel Houellebecq. Mufananidzo: EFE Andreu Dalmau
Michel Houellebecq akazvarwa pazuva rakafanana nanhasi kubva 1958 pachitsuwa cheReunion. Munyori, munyori wenyaya uye mudetembi, ndiye munyori wemanovels akamuita mutambi wenhau wepasirese anopokana. Asi zvakare iri imwe ye vakasimba uye vanodarika vanyori venhau vemazuva ano. Uye mudetembi. Nhasi ndinosarudza 5 nhetembo yebasa rake rerwiyo.
Akazvarwa aine zita rekuti Michel Thomas, asi akagamuchira zita rekunyepedzera rekuti Michel Houellebecq kwambuya vake, vanova ndivo vakamurera.
Yakawana budiriro muna 2001, pamwe neyakagamuchirwa zvakaenzana sekurambwa Platform. Uye gare gare, ne Mepu uye Ndima, yakave nesimba rakakura mushure mekukunda iyo Goncourt Mubairo. Asi gakava rake guru akaenda na Kuzviisa pasi, uko inosimudza ramangwana Islamist France.
Su nhetembo tevera iyo mutsara mumwe chete yenyaya yake uye anopedzisa chimiro cheumwe wevashoma vanyori vane hunyanzvi mumabhuku epanguva ino.
Mubasa rake Nhetembo (rakaburitswa naAnagrama) rinounza pamwechete ake mana mabhuku eiyo genre -Kupona, Iyo pfungwa yekurwira, Kutsvaga kwemufaro y Kuberekwazve- uye iri mumitauro miviri. Imwe mavhesi emahara, echinyakare uye enhetembo prose ine madingindira akasiyana siyana.
Munhetembo hakusi kungorarama chete vatambi, asi mazwi.
Muviri wangu wakaita sesaga rakarongedzwa neshinda dzvuku
Imba yacho yakasviba, maziso angu ari kupenya zvishoma
Ndinotya kumuka, ndinonzwa mukati
Chinhu chakapfava, chakaipa, chinofamba.
Ndakavenga nyama iyi kwemakore
Iyo inovhara mapfupa angu. Of adipose pamusoro,
Inonzwisisa kurwadziwa, zvishoma zvinopisa;
Zvishoma pazasi, nhengo inosunga.
Ndinokuvenga iwe, Jesu Kristu, nekundipa muviri
Shamwari dzinonyangarika, zvese zvinotiza, nekukurumidza,
Makore anopfuura, ivo vanotsvedza, uye hapana chinomuka,
Handidi kurarama uye rufu runondityisa
Mukusagadzikana, kunyarara kusingafadzi,
Ndiripo. Ndiri ndoga. Kana vakandirova, ndinotama.
Ndinoedza kuchengetedza chinhu chitsvuku uye chinobuda ropa
Nyika inyonganiso chaiyo uye isingaregerere.
Kune vanhu vakakomberedza, ndinovanzwa vachifema
Uye nhanho dzayo dzemakanika dzinosangana pane iyo trellis.
Zvisinei, ndakanzwa kurwadziwa uye kutsamwa;
Pedyo neni, padhuze chaizvo, bofu rinogomera.
Ndapona kwenguva yakareba. Izvo zvinosetsa.
Ndinorangarira kwazvo nguva dzetariro
Uye ini ndinotorangarira hudiki hwangu hwepakutanga
Asi ini ndinofunga iri ndiro rangu rekupedzisira basa.
Unoziva? Ndakazviona zvakajeka kubva pasekondi yekutanga,
Kwakatonhora uye ndakanga ndichidikitira nekutya
Zambuko rakatyoka, dzaive nomwe o'clock
Kutsemuka kwaivepo, kwakanyarara uye kwakadzika.
Ndakatonzwa ndachembera ndichangoberekwa;
Vamwe vakarwa, vakashuva, vakagomera;
Mukati mangu hapana chandakanzwa kunze kwekusaziva kusanzwisisika.
Handina kumbobvira ndawana chero chinhu senge hudiki.
Mukudzika kwemamwe masango, pane kapeti yemoss,
Hunde dzinosemesa dzemiti dzinopona pamashizha awo;
Pakati pawo mamiriro ekuchema;
Fungi inobudirira paganda rake rakasviba uye rakasviba.
Handina kumbobvira ndashandira chero chinhu kana chero munhu;
Tsitsi. Unorarama zvakaipa kana zviri zvako.
Kufamba kushoma idambudziko,
Unonzwa kusuwa uye zvakadaro wakakosha.
Iwe unofamba zvisina tsarukano, sediki diki.
Iwe hausisiri chero chinhu zvakare, asi inguva yakaipa sei iwe unayo!
Unotakura nemhando yegomba rakadzika-dzika
Zvinoreva uye zvinotakurika, zvishoma kuseka.
Unomira kuona rufu sechinhu chinouraya;
Nguva nenguva unoseka; kunyanya pakutanga;
Unoedza zvisina maturo kutora ruzvidzo.
Ipapo unogamuchira zvese, uye rufu ndozvinoita zvimwe.
Kune guta rinogara riine zvimisikidzwa zvevananyanduri
Kuti pakati pemadziro aro ivo vakayambuka kwavo kwakatemwa
Mvura kwese, ndangariro dzinogunun'una
Mazita evanhu, mazita emaguta, kukanganwa.
Uye nguva dzose yakafanana nyaya yekare inotanga zvakare,
Undone Horizon uye mamassage makamuri
Kufungidzirwa kuva wega, nzvimbo inoremekedza,
Kune, zvisinei, vanhu varipo uye vanotamba.
Ivo vanhu verumwe rudzi, vanhu verumwe rudzi,
Tinotamba takakwidziridza dhanzi rine hutsinye
Uye, neshamwari shoma, isu tine denga,
Uye kukumbira kusingaperi kwenzvimbo;
Iyo nguva, iyo yekare nguva, iyo inoronga kutsiva kwayo,
Iyo isina chokwadi runyerekupe rwehupenyu hunopfuura
Muridzo wemhepo, kuyerera kwemvura
Uye iyo yeyero imba umo rufu rwunofambira mberi.
Hazvisi izvo. Ndinoedza kuchengetedza muviri wangu mune zvakanaka. Pamwe akafa, handizive. Pane chimwe chinhu chinofanirwa kuitwa chandisingaite. Havana kundidzidzisa. Gore rino ndakura zvakanyanya. Ndasvuta midzanga zviuru zvisere. Musoro wangu wakarwadza kazhinji. Asi panofanira kuva nenzira yekurarama; chimwe chinhu chisiri mumabhuku. Kune vanhu, pane mavara; asi kubva pagore kusvika kune rinotevera handitomboziva zviso
Handiremekedze murume; zvisinei, ndinomuitira godo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Michel Houellebecq ane zuva rekuzvarwa. 5 nhetembo dzebasa rake